Umnotho we-Air Conditioner webhasi, Umqeqeshi, Ibhasi Lesikole nefektri nabakhiqizi bebhasi SONGZ
Uchungechunge lwe-SZQ, Umnotho, i-A / C ngebhasi elingu-9 kuye ku-12.9 m, ukugeleza okufanayo kwe-aluminium fin condenser
Ngokuqondene ne-air conditioner yetekisi noma ibhasi engaphansi kuka-8.5m, sicela ubheke uchungechunge lwe-SZG. Noma ungaxhumana nathi ku- sales@shsongz.cn ukuthola eminye imininingwane.
Ukucaciswa kobuchwepheshe bebhasi A / C SZQ Series:
20 kW noma 68240 Btu / h
24 kW noma 81888 Btu / h
26 kW noma 88712 Btu / h
28 kW noma 95536 Btu / h
22 kW noma 75064 Btu / h
30 kW noma 102360 Btu / h
Kunconywe Ubude Bebhasi able Kusebenza kusimo sezulu saseChina）
I-3680 × 1860 × 188 (mm)
I-75.5 A (24V)
I-76 A (24V)
I-SZQ-V / FD
33 kW noma 112596 Btu / h
35 kW noma 119420 Btu / h
37 kW noma 126244 Btu / h
36 kW noma 122832 Btu / h
38 kW noma 129656 Btu / h
40 kW noma 136480 Btu / h
I-92.5 A (24V)
I-100 A (24V)
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-Ⅲ-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-ⅢF-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-Ⅳ-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-ⅣF-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-Ⅵ-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-ⅥF-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-VD Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZQ-VF-D
3. Umsebenzi wokushisa ungakhethwa.
Ukwethulwa Okuningiliziwe Kwezobuchwepheshe kweSZQ Series Air Air Conditioner
1. Ukubukeka Okuhle
I-SZQ air conditioner yochungechunge isebenzisa ukwakheka okuncane, ubukhulu be-air conditioner yi-188mm, engaphansi kobukhulu besimo somoya esivamile samanje, esihlangabezana nezidingo zebhasi zokulawula ukuphakama kwe-air conditioner. Ngaphezu kwalokho, ukubukeka kwe-air conditioner kuklanyelwe ukuhlehliswa, okuhambisana nobuhle besimanje futhi inokubukeka okuhle futhi okuyimfashini.
2. Idizayini engasindi
I-condenser isebenzisa umugqa wokugeleza ofanayo. Isisekelo se-condenser sakhiwe njengohlaka lwe-V olubunjiwe ngaphandle kwesakhiwo segobolondo eliphansi. Imbobo yomoya yomhlangano we-evaporator yamukela isakhiwo sokugoba esihlanganisiwe esisezingeni eliphansi. Ngalezi zindlela ezingenhla, isisindo sesifutho somoya sincishisiwe kakhulu.
Umugqa wokugeleza ofanayo ne-V-frame ngaphandle kwesakhiwo segobolondo phansi
3. Ukudluliselwa kokushisa okusebenzayo
Ekudizayineni kwendlela yokugeleza kwe-condenser yokugeleza okuhambisanayo, indawo enamazinga aphezulu okushisa efrijini yangaphakathi ihambelana nendawo yejubane lomoya oqondile we-condenser. Ukumelana nokushisa komehluko wokushisa okuphezulu kanye nomklamo ofanele wobude benqubo kusetshenziselwa ukunciphisa ukumelana nokugeleza. ngaleyo ndlela kwandisa ukushisa kwesikhondisi kanye nekhono lokushintshanisa ukuze kukhulise ukusebenza kahle kokushintshana kokushisa okuhambisanayo.
4. Ukuvikelwa kwemvelo
Uma kuqhathaniswa nama-condensers wendabuko we-tube-fin, uchungechunge lwe-SZQ lusebenzisa ama-cores wokugeleza afanayo okwenziwe kahle nokwenza kahle kwepayipi lokupholisa umoya. Lokhu kusiza ukunciphisa ukukhokhiswa kwesiqandisi ngama-40%. Ngaleyo ndlela kuncishiswe umthelela wokuvuza kwesiqandisi emvelweni.
Langaphambilini I-Air Conditioner yeBhasi, Umqeqeshi, Ibhasi lesikole neBhasi eliqokiwe
Olandelayo: I-Conditioner yebhasi ye-Double Decker Bus